Jeneraal Gaafow oo si kulul u beeniyay warqad been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Jeneraal Gaafow oo si kulul u beeniyay warqad been abuur ah oo lagu faafiyay baraha bulshada (AKHRISO)
Taliyihii hore ee NISA Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamed ayaa si kulul u beeniyay warqad been abuur ah oo maalmihii ugu dambeysay lagu faafiyay baraha ay bulshada ku xiriirto.
Warqadaasi oo laga dhigay mid si rasmi ah uga soo baxday xafiiska ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Jeneraal Gaafow markale loo magacaabay xilka hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo uu hore usoo qabtay.
Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud ayaa sheegay in warqadaasi aanay waxba ka jirin islamarkaana uu la socdo dadka sida rasmiga ee arrinkaasi been abuurka ah uga dambeeya.
“Waan garanayaa dadka been abuurkaas faafiyay, waxayna ku dhex sugan yihiin xarunta madaxtooyada iyo hoteelada Muqdisho, waana arrin foolxumo ah in dadka farsameeyay oo iyagoo la garanaayo ay saxiixa ra’iisul wasaaraha ka been sheegaan” Sidaasi waxaa yiri Jeneraal C/laahi Gaafow Maxamuud.
Dhinaca kale, Jeneraal Gaafow ayaa dhawaan laga soo xigtay in ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo madaxweyne Farmaajo ay hore ugu ballan-qaadeen in xilka uu haayay aanay laga qaadi doonin, balse ay haatan dhacday.
Ugu dambeyntii, Jeneraal Gaafow ayaa dalbaday in dadka arrinkaasi ka dambeeyay laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan, isagoona ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay ka hortagto shaqsiyaadka noocaan oo kale ah ee caado ka dhigtay inay faafiyaan warqadaha been abuurka ah ee lagu dul saxiixo madaxda dalka.
Hoos ka Aqriso warqada been abuurka ah
Woman pleads guilty to hitting immigrant with beer mug